မီထူး မီထူး.. Same Same | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » မီထူး မီထူး.. Same Same
မီထူး မီထူး.. Same Same
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Apr 1, 2015 in Opinions & Discussion | 14 comments
တချိန်လုံး အမေ အမေနဲ့ အမှီပြုလာဒေါ့ အဲဒီ အမေဂျီး မရှိလျင် မဖြစ်လို့ ထင်ဂဲ့သဗျ… ကာလတခု ဖြတ်သန်းပြီးနောက် ရတာတွေ ပျံဆန်းစစ်တော့ ဘာမှလည်း ထင်သလောက် ဖျစ်မလာ။ နောက်ရှုဒေါင့် တခုကနေ စဉ်းစားလျင်.. အမေဂျီး မရှိဒေါ့ဂေါ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စား လှုပ်ရှားမှ မုန့်စားရမယ် မဟုတ်လား။ ဒီတော့ ရှိရှိ မရှိရှိ ခေါင်းခဲစရာ မလိုဒေါ့..။
အတီပြောဒါ.. ဘွားဒေါ်ကို နာမည်ဖျက်နေတာ မဟုတ်..။ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် စစ်တပ် ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲ ရှိတယ်။ အယင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကွာတာရှိလျင် ထောက်ပြပါ။ တိုင်းပြည်တခုရဲ့ ဒေါက်တိုင်သည် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ဆိုဂျပါစို့..။ ဈေးကွက်စီးဘွားရေး စနစ်ကို စစ်ဗိုလ်များ အလွန်နှစ်သက်အိ။ ဒီမိုတောင်းတောင်း မတောင်းတောင်း အဲဒီစနစ်ကိုပဲ လုပ်မှာ..။ သူတို့ အကျိုးစီးပွား အလွန်ဖြစ်သကိုး.. တုတ်နဲ့ကော်ချတောင် ဘယ်တော့မှ ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေးစနစ်ကို ပျံမသွား။ (လည်ဖြတ်ခံ လောင်းရဲအိ)
နိုင်ငံရေးမှာလည်း အာရှမှာစို ကမ္ဗောဒီးယား၊ ဆူဟာတိုခေတ် အင်ဒိုနီးရှား ပုံစံ.. အရှေ့အလယ်ပိုင်းက အီရန်ပုံစံ သွားနေတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ ရှိမည်၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရှိမည်.. သို့သော် စစ်တပ်ကို မဝေဖန်၊ အစိုးရကို မဆန့်ကျင်ရ၊ ဘာသာ သာသနာကို မလေးမစား မလုပ်ရ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီအရာသုံးခုကို နိုင်ငံဒေါ်လို့ ပုံသွင်းရို်က်ယူထားလို့။ ဘွားဒေါ်ရှိရှိ မရှိရှိ.. ရွေးဂေါက်ပွဲ အနိုင်ရရ မရရ၊ အဲဒီ ဘောင်ကိုထိလျင် အတီးခံရမှာ သေချာသည်။ အတိုက်အခံက အာဏှာရတယ်ထား လုံခြုံရေးအတွက် ရဲမပြောနဲ့ အရံမီးသတ်နှင့်ကြက်ခြေနီတောင် ဩဇာညောင်းဖွယ် မမြင်။ ပြည်သူ့ရဲဘော်လို အပျော်ထမ်းတပ် ဖွဲ့မည်ဆိုလျင် ဖွတ်တွေက တန်ပြန် ဖွဲ့ ပိုသောင်းဂျန်း ပြလိမ့်မည်။
စိုဒေါ့ ပြောချဉ်တာ ရှိလို့ မထူးလျင် မရှိလည်း ဘာမှ မီထူး..။ ဒါဂ ဒီမိုအပြည့် လိုချဉ်လွန်းသူတျောက် အနေနဲ့ သုံးသပ်တာ..။ တဖက်သက် ဆန်လွန်းဆိုလျင် နည်းနည်း လျှော့မဲ..။ ဘွားဒေါ်ရှိလို့ ခုလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလျင် သူမရှိလည်း ဒီလောက်တော့ ဖြစ်မည်။ ဘာလို့လဲ.. ခုအနေအထား ရောက်ဖို့ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းထဲက အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာ ဖြစ်စဉ်တွေ ပြန်ကြည့်။ နှောင့်နှေးတာ လိုတိုးပိုလျှော့တွေကလွဲ သူတို့ရေးတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းအတိုင်း ချည်းပဲ မဟုတ်လား။ ပြည်သူတွေ ဒီမိုလိုခြင်မှန်းသိတော့ သူတို့နဲ့တန်တဲ့ ဒီမိုပျက်ကိုပဲ မိတ်ကပ်ဖို့ပေးမှာ..။ ဆိတ်စွမ်းရှင်နဲ့ သပ်ချောင်တွေကတော့ ဟုတ်လှပီပေါ့။
ခလေးဘဝ သိတတ်စအရွယ် ပထမဆုံး သင်္ကြန်အပြီး နှစ်သစ်ကူးညမှာ မျှော်လင့်ချက် အပြည့်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖူးတယ်။ နောက်နေ့မနက် နှစ်သစ်အစလည်း ပြုရော မနေ့ကနဲ့ ဘာမှမထူး ဒီမြေ ဒီလေ ဒီနေရောင်ပဲ။ မုန့်လည်း ပိုစားကောင်းမလာသလို ဈေးလည်းပိုပေါမလာ.. မုန့်ဖိုးလည်း ပိုမရ။ ဒီလူတွေပဲ ဒီလမ်းမှာ ဒီလိုပဲ သွားနေဂျလေအိ…….။
သများလေ Icon of Reform ဖီဖီ ဥသေးစိမ် ဂျီးနောက်ကိုဘဲ ရုံကျီဇွာ လိုက်ပါပါတော့မယ်။
ဘဇပ် ဆယ်ပေါက် ရှိယင်ဒေါင် ပျောဇရာ ဇဂါး မယှိဒေါ့ဗာပုစ်
မိတ်စကပ်ဖို့ပေးထားဒဲ့ ဒီမိုပျက်စ်လေးနဲ့ဗဲ လှသယောင်ယောင်
အနူဒေါထဲမှာ ကိုယ့်အရှင်းရှင်းဗဲ လှသလားမေး
အမေ့ဂိုမှ မျှော်link လို့ မယလှင် မီနက်ဖျန်ဆိုတာလည်း ဒီဂနေ့နှင့် ဘာမျှ မီထူး
အူးကြောင် ဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့ဒေါ့.. ဇွန်ကြီး စကောလားရှစ်ရရေးး တို့အရေးဘဲ…
ကမ်ဘာပျက်တောင် မြန်မာပြည် ဒီမိုအစစ်မီရဘူး.. သေချာလယ်…။ ။
အဲ့ဂလို ဆိုdog ကျုပ်​ဒို့က ဘာsex လုပ်​ရမလဲ ။ ထ ကရမာလား ¿ အဲ့ သဗုံထ ယမလား ¿¿¿ လာ ခီညားပျံလာပြည်း ​ခေါင်း​ရှောင်​လဲ့ !
ကိုယ်ကတော့ ဘာကွန်မန့်မှ မပေးတတ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် ပိုစ့်ရေးသူနဲ့အပြိုင်ကွန်မန့်တွေက မိုက်စ်တယ်။
အခု.. ၇ချက်အပြီး.. ၈ချက်မြောက်က.. ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိလို့.. အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေချိန်… ပွဲမသိမ်းတတ်တာဆိုးတယ်လို့.. ထင်မိတယ်..။
♫ ∮ ♪ဘယ်သူမဆို.. ♬ ♪ ♩♭♫ ကိုယ်တန်ရာပဲရတယ်..♫ ∮ ♪
ဘယ်သူတက်တက်… ဘယ်အစိုးရတက်တက်.. ဘယ်စနစ်နဲ့လုပ်လုပ်…
နှစ်၁၀၀၀ ကျခဲ့တဲ့.. ကျိန်စာက… ခင်ဗျားတို့မလွတ်တော့ဖူးဆိုတာကိုတော့.. ပြောချင်…။
အဟင့်​ သူဂျီး​ပြောသလိုဆိုရင်​ ဗုဒ္ဓဘာသာက ခဏ ထွက်​ပီး ဒီမိုက​ရေစီစစ်​စစ်​ ရမှ သရဏဂုံ ပြန်​တင်​ရမဲ့ ကိန်း
ကိုရင်နေပြောပုံက.. အခုလောလောဆယ်မှာ..ထေရာဝါဒထဲမှာမရှိနေပဲ.. ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာပဲရှိနေသလိုလို…။
ဘာသာတရားက ကျမ်းစာအုပ်​​တွေထဲမှာပဲ ရှိ​နေတာ လူ​တွေရဲ့ ရင်​ဘတ်​ထဲမှာမရှိဘူး ။ လူ​တွေရဲ့ ရင်​ဘတ်​ထဲ ရှိ​နေတာက အယူသီးမှု​တွေ ဝါဒအမျိုးမျိုးရဲ့ စွန့်​ပစ်​ပစ္စည်း​တွေနဲ့ ပြည့်​​နေတာ ။
တောက်ကြောင်… အသလွတ်ဝင် ဆွမ်းကြီးလောင်းသွားသီ မှတ်ပါ
အူးကြောင်ကြီး ပြန်လာမှ ထူးလိမ့်မယ်…
ထို့ ကြောင့် အူးကြောင်ကြီး မြန်တျန့် ကို ပြန်လာဘာ….
အူးကြောင် သာလျှင် မြန်တန့် ရဲ့ သူရဲကောင်းကြီး….
ကကြောင် says: စစ်တပ်ကို မဝေဖန်၊ အစိုးရကို မဆန့်ကျင်ရ၊ ဘာသာ သာသနာကို မလေးမစား မလုပ်ရ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီအရာသုံးခုကို နိုင်ငံဒေါ်လို့ ပုံသွင်းရို်က်ယူထားလို့။
.အီရန်ပုံစံသွားနေတယ်ဆိုလို့ အီရန်မှာ စာသင်ပုံတွေ ပြောပြချင်သေးတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းစတက်တာနဲ့ အဖွင့်သင်ခန်းစာ အဖြစ် သံပြိုင်အော်ရတာရှိတယ်။ မား … ဘား … အမေရိကား တဲ့။ အဓိပ္ပါယ်က အမေရိကား ကျဆုံးပါစေတဲ့။ အဲဒါကို အကြိမ် ၂၀ လောက်အော်ရတယ်။ ပြီးတော့ မား … ဘား … အစ္စရေးလီ တဲ့။ အဲဒါကိုလည်း အော်ကြရတယ်။ ပြီးမှ စာသင်တယ်။ ဆရာမတွေ ဆိုရင်လည်း ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့လူမှ ခန့်တယ်။ အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ဦးထိပ်တင်ကြရတယ်။
ကကြောင်ကတော့ တကယ့်ပညာရှိပဲ။ ဒါကို သိထားတယ်ပေါ့။ အခု မြန်မာပြည်လည်း ဒီပုံအတိုင်း သွားနေတာပဲဟာ။ အနုအရင့်ပဲ ကွာတယ်။ ဆူဒန်ရော၊ အာဖဂန်နစ္စတန်ရော၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ အီရန် အီရတ်၊ ဆီးရီးယားတောင် ပါလိုက်သေးတယ်။ အဲဒီက မိန်းမတွေဘ၀ တကယ့်ငရဲ။